www.europenepalikhabar.com २०७९ बैशाख २८ गते बुधबार, 11-05-2022
श्रीलंकामा निवर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेको एक घरलाई प्रदर्शनकारीले जलाइदिएपछि पूरै देशमा कर्फ्यु जारी गरिएको छ । कर्फ्यु उल्लंघन गर्नेहरुलाई देख्नासाथ गोली चलाउन आदेश दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री राजापाक्षे र उनको परिवारका सदस्यहरुलाई सुरक्षाकर्मीले घरबाट बाहिर निकालेर पूर्वोत्तर क्षेत्रमा रहेको त्रिनकोम नौसैनिक अड्डामा लगेर राखेको बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार सोमबार राति श्रीलंकामा राजनीतिक दलका ५० भन्दा बढी नेताहरुको घरमा आगजनी भएको छ । उनीहरुले पनि अन्यत्र शरण लिएर बसिरहेको बताइएको छ ।
श्रीलंकामा बुधबारसम्मका लागि कर्फ्यु जारी गरे पनि विरोध प्रदर्शन जारी छ । मंगलबार राजधानीका सडक सुनसान देखिए पनि रातिमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरु भएका बीबीसीले जनाएको छ । सोमबारदेखि मंगलबारको अवधिमा सात जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २०० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
प्रदर्शनकारीले गाडीहरुमा आगजनी र तोडफोड गरेका छन् । राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको घर अगाडि ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी भेला भएका छन् । उनीहरुले उनको पनि राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
चीन र ताइवानबीच किन बढ्यो तनाव ? के युद्ध सुरु हुन लागेको हो ?
परमाणु युद्ध सुरु भयो भने नेटो गठबन्धनका देशहरू आधा घण्टाभित्र समाप्त हुन्छन्
युद्ध र नाकाबन्दीका बीच पनि किन ठूलो आर्थिक संकटमा परेको छैन रुस ?
विश्वमा कोरोना महामारीबाट मृत्यु हुनेको वास्तविक सङ्ख्या १ करोड ५० लाख : विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन
फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा माक्रोँ पुन: विजयी
के पुटिनले आणविक हमला गर्लान् ? यस्तो हुनसक्छ अवस्था
रुस-युक्रेन युद्धले युरोपको राजनीतिमा कस्तो परिवर्तन ल्याउला?